स्कूल नोटबुकबाट नोटबुक कसरी बनाउने शिल्प अन
स्कूल नोटबुकबाट कसरी नोटबुक बनाउने
मारियन monleon | | शिल्प, रिसाइकिलिंग
पक्कै पनि तपाईंसँग घर मा ती नोटबुकहरू छन् जुन मेरुदण्डमा राखिएका छन् र तपाईंलाई केही बताउँदैन। ठिक आज म तिमीलाई देखाउन जाँदैछु कसरी स्कूल नोटबुकबाट नोटबुक बनाउने र यसको उपस्थिति पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने, कसैले पनि भन्दैन कि तपाईंले यसलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नुभयो।
स्कूल नोटबुक (दिन A5 आकार)।
डबल पक्षीय टेप।
मैले भनेको जस्तै, हामी एउटा स्कूल नोटबुकबाटै जाँदैछौं, यी मध्ये एक मेरुदण्डमा राखिएका छन्। कटर र एक शासकको सहयोगमा, नोटबुकलाई आधा काट्नुहोस्शासकलाई धेरै दबाब दिन्छ र कटरमा थोरै, धेरै पासहरू बनाउनु उत्तम हुन्छ, ताकि यो सर्दैन र काटिएको सफा हो।
कम्मोरो क्षेत्र हटाउन उही अपरेशन दोहोर्याउनुहोस् र त्यो पातहरू यस प्रकार रहन्छन्।
अब सजावटको लागि ढक्काहरू लिनुहोस्। ढकलीमा सजाइएको कागजलाई दुई-पक्षीय टेप। कन्टेनरहरूलाई त्रिकोणमा काट्नुहोस् केही ime० मिलिमीटरको ढक्कनमा कार्डबोर्डको छेउमा।
अब भित्रै मोड्नुहोस्, दुईपक्षीय टेपको साथ टाँस्नुहोस्।
यो बस्तु लगाउने समय हो। पंच वा पंचको सहयोगले प्वाल बनाउनुहोस्। अकसर घुसाउनुहोस् र यसलाई समात्न पछाडि खोल्नुहोस्। यसलाई अझ बलियो बनाउन तपाईं केही मास्किंग टेप थप्न सक्नुहुन्छ।
अब फिर्ता पछाडि कभर मा राख्नुहोस् यसलाई डबल-पक्षीय टेप वा गोंदको थोप्लोसँग बन्धनमा राख्दै। तपाईं साटन रिबन वा कर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ.
कभर सजाउन मैले मेरुदण्डको रूपमा फीता चिपकाएँ। समय अब ​​अन्तहरू राम्रोसँग सम्पन्न हुनको लागि छ।
क्याप्सको मापन लिनुहोस् र प्रत्येक आयतमा दुई आयताकार आधा सेन्टिमिटर कम काट्नुहोस् र आवरणको भित्री भागमा गोंद गर्नुहोस्. मेरो केसमा मैले पूरै रूपरेखामा यसलाई अर्को फिनिश दिनको लागि मसी लेखेको छु।
छविमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो एक पटक आवरणको भित्री भागमा सजाइएको कागजातहरू टाँस्दा यसले कस्तो देखिन्छ।
सबै बाँध्न तयार छ। यदि तपाईंसँग बाइन्डर छैन भने, तपाईं यसलाई स्टेशनरी स्टोरमा वसन्त लिनको लागि लिन सक्नुहुनेछ वा छेउमा दुईवटा औठीहरू राख्न सक्नुहुन्छ।
आकृति मर्नुहोस् र कभरमा टाँस्नुहोस्। यहाँ तपाईं आफ्नो कल्पना प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको नोटबुक सजावटको लागि तपाईं चाहानुहुन्छ, म यसलाई अधिक रोमान्टिक रूप दिन चाहन्छु र मैले एउटा पुतली काटें।
अन्त्यमा, बन्दको लागि लेसको टोकुमा एउटा बल वा मोती राख्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: शिल्प अन » शिल्प » रिसाइकिलिंग » स्कूल नोटबुकबाट कसरी नोटबुक बनाउने
Board विचारहरू कार्डबोर्ड ट्यूबहरूलाई रिसायकल गर्न र क्रिसमस सजावटहरू सिर्जना गर्न
बच्चाहरूको लागि ईवा रबरको साथ क्रिसमस रूख बुकमार्कहरू